China Jinan Factory Hot Sale Automatic CNC Wood Lathe Mihodina latabatra seza tongotra mpanamboatra sy mpamatsy |fara tampon'ny
Jinan Factory Hot Sale Automatic CNC Wood Lathe Mihodina seza seza
Automatic CNC Wood Lathe dia natao ho an'ny cylindrical workpiece, tubular maranitra sy ny fiara hazo asa tanana toy ny baseball ramanavy, andry, tohatra tsanganana, roman tsanganana, ankapobeny tsanganana, latabatra tongotra, seza tongotra, sns.
Fampiharana ny Double Axis Automatic CNClathe hazo
Double axis mandeha ho azy CNClathe hazodia ampiasaina amin'ny workpiece cylindrical isan-karazany, lovia maranitra, tubular maranitra sy ny fiara asa tanana hazo, toy ny tohatra isan-karazany tsanganana, tsanganana ankapobeny, roman tsanganana, latabatra na seza tongotra, washstand, hazo vazy, latabatra hazo, baseball ramanavy, fiara fanaka hazo, ankizy andry fandriana, sns.
Parametera ara-teknika ny Double Axis Automatic CNC Wood Lathe
Max halavan'ny fihodinana 100mm - 1500mm
Max fihodinana savaivony 20mm - 160mm
Isan'ny axe axe roa
software anisan'izany ny
Herin'aratra AC380v/50hZ na AC220V/60HZ
Refy ankapobeny 330*150*130cm
Vidiny isan-karazany $5,280.00 – $6,680.00
Toetran'ny Double Axis Automatic CNC Wood Lathe
1. Heavy Cast vy lathe fandriana misoroka ny fihozongozonana rehefa mihodina haingana ny spindle na ny dingana workpiece lehibe habe, ary ny hafainganam-pandeha lehibe azo ahitsy amin'ny alalan'ny mpanova matetika.
2. DSP mitantana controller amin'ny USB interface tsara, izay mora kokoa ho an'ny allign cutters.
3. Taiwan Hiwin mpitari-dalana lalamby sy Alemaina baolina visy, avo mazava tsara sy mateza.
4. Spindle mizara ho axial tokana sy biaxial, ny chuck dia azo apetraka amin'ny rafitra ary ny biaxial dia afaka mamokatra ampahany roa amin'ny fotoana iray ihany.
5. Double axis mandeha ho azy CNC lathe mampiasa an-trano marika malaza stepper maotera mba hahazoana antoka ny marina.
6. Ny angon-drakitra hafainganam-pandehan'ny spindle dia aseho eo amin'ny tontonana kabinetra.
7. Indray mandeha ihany ny fametrahana fitaovana.
Ny antsipirian'ny Double Axis Automatic CNC Wood Lathe
1. Fanohanana afovoany mba hisorohana ny fihovitrovitra, ny peratra tsy miovaova ao anatiny miaraka amin'ny 2.67 santimetatra ho an'ny hazo manify.
2. Air cylinder mba hampitony ny baseball ramanavy, vy milina vatana mavesatra kokoa sy mafy orina.
3. Axe roa misy mpanapaka efatra, fihodinana haingana sy malefaka kokoa.
Tetikasan'ny Double Axis Automatic CNC Wood Lathe
2021 famolavolana vaovao Auto Feeding CNC Machine Panel ...
Fibre Laser Marking Machine amidy a...
20W Mini Metal Fibre Laser Marking Machine ho an'ny ...